के हो महिलाको स्तन क्यान्सर ? कसरी थाहा पाउने ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > विविध > के हो महिलाको स्तन क्यान्सर ? कसरी थाहा पाउने ?
स्तनका कोषहरू असामान्य रूपमा वृद्धि हुन थालेपछि स्तन क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ । साधारणतया कोषहरूको वृद्धि र विभाजन शरीरको आवश्यकता अनुसार हुन्छ । तर, जब शीघ्र रूपमा र धेरै मात्रामा कोषहरू वृद्धि र विभाजन हुन्छन्, पुराना कोषहरू टाँसिएर रहन्छन् तब गिर्खा वा ट्युमर बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। स्तनमा भएका कोष–कोषिकामा असामान्य परिवर्तन आई तिनीहरूको अनियन्त्रित तथा अनावश्यक वृद्धिबाट बन्ने गिर्खा, गाँठागुँठी र निको नहुने घाउलाई स्तन क्यान्सर भनिन्छ । त्यो प्रक्रिया क्यान्सर नहुने वा हुने दुवै प्रकृतिको हुन सक्छ।
स्तनको रङ परिवर्तन हुन थालेमा ।
वंशाणुगत रगतको नातामध्ये आमा, दिदी, बहिनी, छोरी कसै एकमा भएमा० कारण स्नत क्यान्सर हुन सक्छ । करिब १० प्रतिशतमा वशांणुगत कारणले स्तन क्यान्सर हुन्छ ।
हर्मोनहरुमा गडबडी हुनाले पनि स्तन क्यान्सर हुन सक्छ ।
नियमित मदिरा सेवन गर्ने महिलामा ।
परिवार नियोजनका साधान पिल्सहरु प्रयोग गर्ने महिलामा क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
जिनमा खराबी आएमा पनि क्यान्सर हुन सक्छ ।
दूध खुवाउने महिलाले बच्चालाई दूध खुवाएनन् भने पनि क्यान्सर हुन सक्छ ।
महिनावारीको गडबडी छ भने पनि स्तन क्यान्सर हुन सक्छ ।
बच्चा नभएका महिलालाई स्तन क्यान्सरको जोखिम हुन्छ ।
बढी उमेरमा बच्चा जन्माउने महिलालाई स्तन क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ ।
ब्रेस्ट सर्जरी दुई तरिकाले गरिन्छ ।
पहिलो हो स्तनलाई नफाली गरिने ‘ब्रेस्ट कन्र्जभेसन सर्जरी’ ।
२०७५ जेष्ठ ९ गते १७:२२ मा प्रकाशित
कलङ्किको ‘अण्डरपास’ असार दोस्रो सातादेखि सञ्चालनमा आउने
वैदेशिक रोजगार : स्थानीय तहबाटै क्षतिपूर्ति सीधै पीडितको खातामा, यस्ता छन प्रक्रिया
नौमती बाजाको धुन सुनेर बसिरहन मन छ, त्यसोभए भोलि नै नाचघरमा जानुस् !
विनोद चौधरीले यो वर्ष २० अर्व सम्पत्ति थपेर फोर्ब्समा २ स्थान उक्लिए